မြန်မာအစိုးရက မေတ္တာရပ်ခံထားပေမဲ့ မလေးရှား ကယ်ဆယ်ရေးသဘောင်္ မြန်မာနိုင်ငံကိုပဲ သွားမယ် Plans to proceed with its controversial Arakan State “food flotilla” later this month | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
Homeမြန်မာအစိုးရက မေတ္တာရပ်ခံထားပေမဲ့ မလေးရှား ကယ်ဆယ်ရေးသဘောင်္ မြန်မာနိုင်ငံကိုပဲ သွားမယ် Plans to proceed with its controversial Arakan State “food flotilla” later this month
မြန်မာအစိုးရက မေတ္တာရပ်ခံထားပေမဲ့ မလေးရှား ကယ်ဆယ်ရေးသဘောင်္ မြန်မာနိုင်ငံကိုပဲ သွားမယ် Plans to proceed with its controversial Arakan State “food flotilla” later this month
January 11, 2017 drkokogyi
မြန်မာအစိုးရက မေတ္တာရပ်ခံထားပေမဲ့ မလေးရှား ကယ်ဆယ်ရေးသဘောင်္ မြန်မာနိုင်ငံကိုပဲ သွားမယ်
((((ဒီအတောအတွင်း မလေးရှားနိုင်ငံက NGO အဖွဲ့များပါတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို စေလွှတ်မယ့်
ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းများပို့မယ့် သင်္ဘောအုပ်စုမှာ နိုင်ငံပေါင်း ၁၄ နိုင်ငံက ပါဝင်မှာဖြစ်တယ်လို့ မလေးရှားအစ္စလာမ္မစ်အဖွဲ့က ကြေညာလိုက်ပါတယ်။
သင်္ဘောမှာ မလေးရှားနိုင်ငံသား ၁၅၀ အပြင် တူရကီနိုင်ငံက ၁၀ ဦးအပါအ၀င် တခြားနိုင်ငံများက လိုက်ပါဖို့ ဆန္ဒပြုသူ ၉၀ လိုက်ပါမှာဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်း ၂၄၅ ဦး ဖြစ်ကြပါတယ်။))))))
Credit : Strait Time
မြန်မာအစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် သွားမယ်မှ
အစီစဉ်အတိုင်း ဒီလ ၃၁ ရက်နေ့မှာ စတင်ထွက်ခွာလာမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
မြန်မာနိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာနက မလေးရှားသံရုံးကို သင်္ဘောထွက်ခွာခွင့်မရအောင်ပိတ်ပင်တားဆီးပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံထားပေမဲ့ အငြင်းပွားစရာဖြစ်နေတဲ့ ရခိုင်ဒေသကို သင်္ဘောက ဒီလနှောင်းပိုင်းမှာ အစီစဉ်တိုင်း နောက်မဆုတ်ပဲဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
အစီစဉ်ကို ဖျက်သိမ်းပေးဖို့ မေးခွန်းထုတ်စရာတောင် အကြောင်းမရှိဘူး။ ဆွေးနွေးစရာ အကြောင်းလည်း မရှိပါဘူးလို့ မက်ပင်အဖွဲ့မှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ၀န်နူးရ်ဒင်းက ဧရာဝတီသတင်းဌာနကို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဖြည့်စွက် ပြောကြားရာမှာတော့ အဖွဲ့ဟာ မလေးရှားအာဏာပိုင်တွေနဲ့ ဆက်သွယ်ပြောဆိုခဲ့ပြီး အကြောင်းပြန်တာကို လည်း စောင့်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မြန်မာ့ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာနကတော့ အဆိုပါ အုပ်စုဟာ မလေးရှားသံရုံးကနေ တစ်ဆင့် ဇန္န၀ါရီလ ငါးရက် နေ့မှာ သင်္ဘောနဲ့ ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ပေးမဲ့ကိစ္စကို တားဆီးပေးဖို့ ဆက်သွယ်ခဲ့တယ်လို့ စနေနေ့က အတည်ပြု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
((ရခိုင်ပြည်သွားမယ့် သင်္ဘော မလေးရှားအဖွဲ့ဝင်တွေ စစ်ဆေးကြည့်ရှု
ကွာလာလမ်ပူမြို့ကလာတဲ့ သတင်းတပုဒ်အရ မလေးရှားကနေ ရခိုင်ပြည်နယ်ကို သွားမယ့်“Food Flotilla For Myanmar” ရိက္ခာတင် သင်္ဘောအုပ်စုမှာ ထည့်သွင်းအသုံးပြုရေးအတွက် Nautical Aliya နော်တီကယ်အလီယာ ဆိုတဲ့ သင်္ဘောကို ဒီခရီးအတွက်ကမကထပြုလုပ်နေသူတွေ မနေ့က သွားရောက် စစ်ဆေးကြည့်ရှုခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အဲဒီ ခရီးစဉ်ကို ခေါင်းဆောင်မယ့် KP1M (1 Malaysia Putera Club) အဖွဲ့ ဥက္ကဌဒါတွတ်ဆရီအဘ်ဒူလ်အာဇီး (Datuk Seri Abdul Azeez Abdul Rahim) က အစစအရာရာအဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် ဒီသင်္ဘောဟာ ရိုဟင်ဂျာတွေကို သွားရောက်ကူညီမယ့် သင်္ဘောအုပ်စုမှာပါဝင်လိမ့်မယ်လို့ ပြောပါတယ်။))
Plans to proceed with its controversial Arakan State “food flotilla” later this month despiteaplea from Burma’s Ministry of Foreign Affairs to the Malaysian Embassy to block the shipment, organizers confirmed on Monday.
“There is no question about cancelation, no issue at all,” Malaysia Consultative Council of Islamic Organizations (MAPIM) spokesperson Wan Nordin told The Irrawaddy, adding that the group had communicated with the Malaysian authorities but was waitingareply.
The food flotilla is scheduled to leave Malaysia on Jan. 31.
Burma’s foreign ministry confirmed on Saturday that it had contacted the Malaysian Embassy on Jan.5to request that they prevent the shipment, according toarelease from the State Counselor’s Office Information Committee.
The statement said that the Burma government had requested Malaysia “take necessary measures to prevent the reported attempt by certain NGOs to send aid flotilla which cannot be allowed to enter without prior approval from the Government of Myanmar.”
The MAPIM shipment to provide food and medicine for Maungdaw and Buthidaung townships has ruffled government feathers after it reportedly received no communication from either the Malaysian Embassy or the aid organization.
A statement last week from the foreign ministry said that aid proposals should be sent through proper diplomatic channels and the Ministry of Social Welfare, Relief and Resettlement. The Government of Arakan State would be responsible for distributing aid to the region, the statement said.
The ministry outlined that “cash or in-kind assistance are to be meant for both communities without any distinction,” referring to Buddhist Arakanese and Muslim Rohingya.
Wan Nordin said that giving to both communities was common practice for the Malaysian organization and that in 2015 it had distributed aid to Buddhist communities in Sittwe and Rangoon.
He said that in previous instances the group had cooperated with local NGOs, and authorities, to deliver aid to camps and poor communities.
President’s Office spokesperson U Zaw Htay told The Irrawaddy last month that the Burmese navy would warn the ship to return to Malaysia, or it would turn it back by force.
Topics: Arakan State, International Relations, Malaysia, Rohingya
← ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရုံး သတင်းထုတ်ပြန်ရေး ပေ့ခ်ျမှာ ban လုပ်ခံထားရတဲ့ လူတွေ အများကြီးဘဲ။ အဲဒီက သတင်းလိမ်တွေကို အောက်ကနေ comment ရေးပြီး ဖြေရှင်းတဲ့ လူမှန်သမျှကို တန်းစီပြီး ban တာ .. နည်းနည်းလေးတော့ ရှက်ပါဦး
ကုလအထူးကိုယ်စားလှယ် ကချင်ပြည်နယ်ခရီးစဉ် ကန့်သတ်ခံရမှု HRW ဝေဖန် →